Abenzi be-Glass Spigot nabaphakeli - China Glass Spigot Factory
Nokufakwa Glass Spider
Insimbi Engagqwali Ukuthuthumela Thumela
Electric Power nokufaka
Ezinye Izingxenye Zemishini
Ukufakwa kwamandla kagesi Ukusakaza izesekeli zamandla ...
Ukufakwa kwamandla kagesi Ukusakaza izesekeli zamandla
Ukufakwa kwamandla kagesi, izesekeli zamandla
Circle Core Spigot, abakhiqizi bezesekeli ezenziwe ngokwezifiso zabasebenzi
Ukuqamba kokuzenzakalela kwezinqubo zokuqalisa ezifana neGeneral Kinematics Sand Casting Conditioner kwenze ukucubungula okuningi kwaba lula futhi kwathuthukisa nekhwalithi yabaphosayo
Oval Deck egibele Spigot, Ekubunjweni wokwakha hardware izesekeli
Le ndlela yaqhamuka eNdiya nasenkabeni ye-Asia kuqala, yaze yavela enyakatho yeYurophu cishe ngo-800 CE, lapho yayisetshenziselwa ukwenza izinkemba zamaViking. Le nqubo ayizange ivuke kuze kube ngu-1750 lapho uBenjamin Huntsman eyibuyisela eNgilandi.
Round Core Drill Spigot, izesekeli ze-Hardware
Inqubo ye-crucible, inqubo esetshenziselwa ukukhiqiza insimbi enhle noma yethuluzi, yavela yanyamalala ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni wonke kusukela ekuqaleni kwenkulungwane yokuqala ye-CE.
Round Deck Mounted Spigot, insimbi engagqwali spigot
Ingilazi spigot ngaphandle kwesisekelo, ingilazi spigot ekubunjweni izesekeli
Amapayipi ensimbi okusakaza kufanele amelane nokugqwala nezingcindezi eziphakeme. Ezinye izingxenye zokulingiswa kumele zingasindi kepha zihlale isikhathi eside. Kuzinhlelo eziningi, izingxenye zenzelwe ukuvumela ukubekezelelana okuqondile phakathi kokunwetshwa nokusikwa.
Side egibele Spigot
Kuwo wonke amakhulu eminyaka, izinhlanganisela ezahlukahlukene zezinto zokusetshenziswa zenziwe ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zensimbi. Eminye imikhiqizo esetshenziswayo isetshenziswa ezinjinini ezidinga ukubekezelelana okuphezulu kokushisa nokubanda.
Indawo Yezomnotho YeLongJu, iDongying City, Isifundazwe saseShandong, eChina.
bhalisa ukuze Uphenyo Lwethu
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela uxhumane nathi futhi sizoxhumana ngaphambi kwamahora angu-24.